Wafdi uu hoggaaminayo Wakiilka QM James Swan oo gaaray Kismaayo.[Masawiro]
Kismaayo:-Wafdi uu hoggaaminayo Wakiilka QM James Swan ayaa saaka gaaray magaalada Kismaayo e xarunta KMG ah ee Jubaland waxaan uu kulamo gooni gooni ah la leeyahay madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam iyo golihiisa xukuumada.
Wafdi uu hoggaaminayo Wakiilka QM James Swan ayaa u jeedka safarkiisu yahay sidii maamulka Jubaland loogu qancin lahaa in ay ka soo qayb galaan shirka wadatshiga Qaran ee lagu qabanayo magaalada Muqdisho walow ay ka soo qayb galka shirka ay ku xireen ilaa 5 qodob.
Beesha Caalamka oo uu wakiil ka yahay Ergeya gaark ah ee QM James Swan ayaa weli ku mashquulsan in ay isku soo jiid jiidaan Madaxda Soomaalida ee uu ka dhexeeyo khilaafka ku saabsan qaabka loo qabanayo doorashada xili uu waqti xileedkii ka dhamaaday 3 gole ee dowladda Federaalka Soomaaliya.
Safarka Wakiilka QM James Swan ee magaalada Kismaayo ayaa ku soo beegmaya xili shalay wafdi ka socda Midowga Yurub ay safar ku tagaaen magaalada Garoowe iyagoo kulamo la qaatay Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Deni walow aan la shaacin wax ka soo baxay kulmadaas ka dhacay Garoowe.
Beesha Caalamka ayaa dadaal ugu jira sidii Madaxda Puntland iyo Jubbaland loogu qancin lahaa in ay ka soo qeyb geli shirka Wadatashiga Qaran ee Muqdisho, si xal deg deg ah looga gaaro is mari waaga ka taagan hirgelinta hannaanka doorashada.